မန်ယူနိုက်တက်ကို ၅-၀ နဲ့ နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ လူတွေ ချီးကျူးဖို့ မေ့လျော့နေတဲ့ လီဗာပူးစတား ၂ ဦးကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ကလော့ - xyznews.co
မန်ယူနိုက်တက်ကို ၅-၀ နဲ့ နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ လူတွေ ချီးကျူးဖို့ မေ့လျော့နေတဲ့ လီဗာပူးစတား ၂ ဦးကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ကလော့
လီဗာပူးဟာ မနေ့ညက မန်ယူနိုက်တက်ကို အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ၅-၀ နဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်မှာ မိုဟာမက်ဆာလားက ဟက်ထရစ် ရယူခဲ့ပြီး သတင်းခေါင်းကြီးတွေမှာ နေရာယူခဲ့သလို နာဘီကီတာ နဲ့ ဒီယေဂိုဂျိုတာ တို့ကလည်း ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ကာ လူတွေရဲ့ သတိထား ချီးကျူးမှုတွေ ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီပွဲစဉ်ကို သေချာကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ရော်ဘတ်တိုဖာမီနိုဟာ လီဗာပူး အတွက် လူမသိသူမသိ ဟီးရိုးတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး false9နေရာကနေ ၎င်းရဲ့ ချိတ်ဆက်ကစားမှုတွေ ၊ နောက်ခံလူတွေကို ဆွဲထုတ်တာတွေ ၊ လုပ်အားကောင်းကောင်းနဲ့ Pressing လုပ်မှုတွေဟာ နိုင်ပွဲအတွက် အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဘရာဇီး စတားရဲ့ အရေးပါမှုကို ယာဂန်ကလော့က မေ့လျော့နေခြင်း မရှိဘဲ false9role ကို ဖာမီနိုရဲ့ နားလည်စွာ ကစားနိုင်မှုကို အထူး ချီးကျူးလိုက်ပြီး တစ်နေ့မှာ လူတွေဟာ သူနဲ့ပက်သက်ပြီး စာအုပ်တွေ ရေးသားလိမ့်မယ်လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
လီဗာပူး မန်နေဂျာက “ဖာမီနိုဟာ ဒီနေ့မှာ နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် ထူးချွန်စွာ ကစားခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မှန်ပါတယ်။ မိုဆာလားဟာ မှန်ကန်စွာနဲ့ လူတော်တော်များများရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘော်ဘီနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောချင်တာ ကတော့ သူ့ကစားသမား ဘ၀ ပြီးဆုံးတဲ့ အခါ ဘောလုံးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဗဟုသုတ ရှိသူတွေ အတွက် false9နေရာကို ဘော်ဘီ ဘယ်လိုမျိုး ဘာသာပြန်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို လူတွေက စာအုပ်တွေ ရေးသားကြမှာ သေချာပါတယ်။
ဒီနေရာကို သူ တီထွင်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကြိမ်တော်တော်များများ ဒီလိုမျိုး ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွင်းထဲမှာ လုပ်စရာ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ခံစစ် ကစားပုံ တစ်ချို့လည်း ပါတာပေါ့ဗျာ။ ဒီညမှာ ဒီနေရာကနေပြီး သူလုပ်ပြခဲ့တာတွေဟာ တကယ့်ကို ထူးခြားပါတယ်။ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ သူဟာ အသင်းဖော်တွေနဲ့ ကောင်းစွာ ချိတ်ဆက် ကစားပေးသူ ဖြစ်ပြီး သူဟာ အကြိမ်များစွာ ဒါကို ကောင်းကောင်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ သူလုပ်ပြတာတွေကို ဘယ်လောက် တန်းဖိုးထားသလဲဆိုတာ ဘော်ဘီသိပါတယ်။ ဒါဟာ ပိုပြီး အရေးကြီးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
နာဘီကီတာရဲ့ ခြေစွမ်းအပေါ် ကလော့က “နာဘီဟာ ပုံစံကောင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။ သူဟာ ထူးချွန်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ပြီး အက်သလက်တီကိုနဲ့ ပွဲမှာ သူဟာ အကောင်းဆုံး ကစားခဲ့ပေမယ့် ခံစစ်ကစားပုံ အမှားတစ်ခုကြောင့် သူ့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အနည်းငယ်ကျဆင်းစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး မဖြစ်သင့်တာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ atmosphere ၊ ဒီလိုပြိုင်ဘက်မျိုးကြောင့် ဒါမျိုးဟာ ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ပုံစံကောင်းမှာ ရှိနေတာကြောင့် သူ့ကို ဒီပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ စတင်စေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဒါကို မှန်ကန်ကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဒဏ်ရာအခြေအနေကတော့ စကန်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးမှ သိရမှာပါ။” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကလော့က “တကယ့် ပြိုင်ဘက်ကောင်းနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ၃ မှတ် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပွဲမျိုးကို ကောင်းကောင်း နားလည်တက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း အက်စတွန်ဗီလာကို ဂိုးပြတ်ရံှုးနိမ့်ခဲ့ဖူးပြီး ဒီကနေပဲ လေ့လာသင်ယူသွားရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ်ကို ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီရလဒ်တွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒီပွဲတွေကို analse လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး အာရုံစိုက် ကစားသွားရမှာပါ။
အခု ၅-ဝ။ ကျွန်တော် ဒီထက် ပျော်ရွှင်တာ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ပြောင်မြောက်တဲ့ ရလဒ်ပါ။ လုံးဝကို ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီလို ရှုံးပွဲတစ်ချို့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အပြန်လမ်းမှာ ဘီယာသောက် သွားမှာပါ။”
ကလော့ဟာ ဒါဟာ လုံး၀ မျှော်လင့်ထားခြင်း မရှိတဲ့ ထူးထူးခြားခြား ရလဒ်လို့ ဆိုလိုက်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ အသင်းဟာ ဒီရလဒ်နဲ့ အတူ သမိုင်းစာမျက်နှာသစ် တစ်ခုကို ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ကလော့က “ကျွန်တော် ဘာပြောနိုင်မှာလဲ? ကျွန်တော် ဒါကို မျှော်လင့်ခဲ့သလား? No ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တိုက်စစ်မှာ လုပ်ပြခဲ့တာတွေဟာ တကယ့်ကို ထူးခြားလွန်းပါတယ်။ high press လုပ်ပြီး ဘောလုံးတွေ ပြန်လည် ရယူကာ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းအပြီးမှာ ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် ကစားရန် သူတို့ကို ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပွဲကို အကောင်းဆုံး စတင်နိုင်ခဲ့ပြီး တစ်ချို့အချိန်တွေမှာ ကစားပုံကို ရပ်တန့်ခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ၅ ဂိုးရပြီးနောက် ပွဲကို ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဂိုးတွေ ထပ်မံသွင်းယူဖို့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ နောက်ထပ် ဒဏ်ရာတွေ မရဘဲ ပွဲပြီးသွားဖို့က အဓိကပါ။ ဒီရလဒ်ဟာ ထူးဆန်းပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ရလဒ် ရှိခဲ့ဖူးသလားဆိုပြီး ကျွန်တော် မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍ မရှိဘူးဆိုရင် ဒီရလဒ်ကို အချိန်တစ်ခုကြာ မှတ်မိနေကြမှာပါ။ ကစားသမားတွေဟာ သမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာ ဒီလို ကောင်းမွန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ စပယ်ရှယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အရူးအမူး အောင်ပွဲခံသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပြိုင်ဘက်ကို လေးစားသွားရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ချို့ အခိုက်အတန့်တွေမှာ ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့်မှာ ရှိမနေပါဘူး။”
Previous Article အီဂျစ်ကင်းရဲ့ ဟက်ထရစ်နဲ့ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ မဟာပြိုင်ဘက်ကို ချေမှုန်းခဲ့တဲ့..မန်ယူနိုက်တက် ဝ-၅ လီဗာပူး ပွဲစဉ်မှ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာများ
Next Article ဆာလာ အမှတ်ပြည့် ရပြီး လီဗာပူး အညံ့ဆုံးက ယူနိုက်တက် အကောင်းဆုံးထက် ပိုကောင်းနေသေးတဲ့ Players’ Rating များ